tank semitrailer Factory | Mpanamboatra sy mpamatsy semitrailer China
Tranofiara vakira simenitra 35-60 cbm namboarina manokana
Amin'ny fampiasana teknolojia famolavolana solosaina CAD mandeha ho azy, ny fiara mifono vy mampiasa longitudinal / peratra ho an'ny seam dia tsy miovaova, afaka mitahiry trano fitahirizana tsy miankina, mandefa fitaovana maratra isan-karazany, hafainganam-pandeha, ambany tahan'ny sisa tavela, avo lenta ny fampisehoana fiarovana, mora ampiasaina . Ny endrika dia boribory na tanky V, ny fitaovana dia afaka misafidy vy vy, vy tsy misy fangarony, firaka alimina. Ao anaty kitapo na fandriana mihetsika na farafara miorim-paka MiZiXing. Fampisehoana tsara ny rafitra tsotra, ny fikojakojana ny volo, ny vucanisation. Afaka misafidy rivotra compressor na tsofa fampitana fiara mivantana (kapila fehikibo sy kapila moto tsy voatery)
Ambongadiny 3 axle 43CBM tranofiara solika solika ho an'ny fampiasana arabo arabo saudi
Ny fitoeran-tsolika dia ampiasaina eo anelanelan'ny sehatry ny solika mankany amin'ny orinasa Aramco na ny fampiasana ny orinasa Aramco mankany amin'ny tobin-tsolika. Maninona no ampiasaina ny tanker aluminium: voalohany, ny aluminium dia fiarovana noho ny vy, izay tsy mora miteraka afo mandritra ny fitaterana; faharoa, ny aliminioma dia lanjan'ny tenany maivana kokoa noho ny vy, izay afaka mitondra fahafaha-mavesatra bebe kokoa; fahatelo, ny aliminioma dia tontolo iainana kokoa, dia afaka mamerina ny 90% amin'ny fitaovana aorian'ny 10+ taona.
Ny chassis an'ny tranofiara koa dia mampiasa hatevin'ny alim-bolo mahery hatramin'ny 25mm.